Shaqo kasta oo aad ka qabto ganacsiga, waxaa lagaa rabaa inaad ka qaybgasho, abaabusho oo aad hogaamiso shirarka. Tababarkan waxa uu ku siinayaa wax ka yar hal saac qalab aad si sax ah ugu diyaargarowdo, billowdo una soo gabagabayso kulammadaada. Koorsadan waxaad ku arki doontaa noocyada shirarka, hab-dhaqanka ka qaybgalayaasha iyo qaar ka mid ah xeerarka muhiimka ah ee isgaarsiinta.
Waxa kale oo aad baran doontaa farsamooyin badan oo fududaynta iyo kulanka. Tababarkan waxaa lagu kobciyay saddex xaaladood oo shirar ah si loo muujiyo waxaad awooday inaad xasuusato. Sidoo kale, xaaladahani waxay kuu oggolaanayaan inaad falanqeyso qaybaha kala duwan ee muhiimka ah si aad u diyaariso shirarka xaaladaha kala duwan ...
Maamulaha Sare: Abaabul iyo maamul shirarka Janaayo 11th, 2021Tranquillus
horeMaamulaha Sare: Fulinta cilad-istaraatiijiyadeed
socdaKu guuleysiga maalgashiga guryaha ee 8 + 1 Talaabooyin